छुट्टीमा आएका मनोज जो बिहानै उठेर दुबई जाने तयारीमा थिए तर राति आएको पहिरोले पुरेर मृत्यु भयो ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/छुट्टीमा आएका मनोज जो बिहानै उठेर दुबई जाने तयारीमा थिए तर राति आएको पहिरोले पुरेर मृत्यु भयो !
छुट्टीमा आएका मनोज जो बिहानै उठेर दुबई जाने तयारीमा थिए तर राति आएको पहिरोले पुरेर मृत्यु भयो !
पहिराले पुरिएर सोमबार निधन भएका तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–८ भैँसीकिलोका स्थानीयवासीका आफन्तलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले राहत रकम वितरण गरेको छ । सो ठाउँका एकै परिवारका पाँच जनाको पहिराले पुरिएर मृत्यु भएपछि प्रशासन कार्यालयले जनही रु एक लाखका दरले रु पाँच लाख आज मृतकका आफन्तलाई वितरण गरेको हो ।
पहिराले पुरिएर स्थानीयवासी आम्बहादुर थापाका छोरा ३० वर्षीय भेषबहादुर थापा, बुहारी २९ वर्षीया नानुमाया थापा, नातिनी ५ वर्षीया छोरी अमिषा थापा, छोरा २२ वर्षीय महादेव थापा र बुहारी १९ वर्षीया मनिसरा थापाको निधन भएको थियो ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेलाई रु एक लाख प्रदान गर्ने नीतिबमोजिम पाँच जनाको रु पाँच लाख गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले मृतकहरुका बुबा आमबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । सो क्रममा मन्त्री गुरुङले जनताको दुःखमा सरकार साथमा रहेकाले केही राहत रकम उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।
मानिसको जीवनभन्दा रकम ठूलो नभए पनि विपद्को अवस्थामा रकमले पीडित परिवारलाई केही राहत पुग्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले मानिस कोही पनि अमर नरहेकाले ढिला चाँडो सबैले संसारबाट बिदा हुनुपर्ने भएकाले शोकको घडीलाई शक्तिमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भौगोलिक हिसाबले भैँसीकिलो सुरक्षित नभएकाले यहाँ बसोबास गरिरहेका घरपरिवारलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
प्रदेशभित्रका जोखिमयुक्त ठाउँको प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्न लागेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गरिरहेका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको पहल गरिने जानकारी दिनुभयो । कोरोनाको महामारीसँगै अहिले प्राकृतिक विपत्ति आइपरेको र विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । “प्राकृतिक विपद्ले प्रदेशभित्र ठूलो धनजनको क्षति भएको छ, प्राकृतिक विपद्का घटना अझै पनि घट्न सक्ने भएकाले थप सतर्कताको आवश्यकता छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीले विपद्का घटनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई जनही रु एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारबाट पनि जनही रु ५० हजारका दरले रु दुई लाख ५० हजार रकम उपलब्ध हुने प्रक्रियामा रहेको अधिकारीले बताउनुभयो ।
ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले गाउँपालिकाका तर्फबाट रु एक लाख राहत रकम उपलब्ध गराइसकेको र थप आवश्यक सहयोग गाउँपालिकाका तर्फबाट रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यहाँ रहेका चार घरलाई सुरक्षित रुपमा स्थानान्तरणका लागि गाउँपालिकाका तर्फबाट पहल भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पहिराले बेपत्ता अझै भेटिएनन्
आइतबार राति परेको भीषण वर्षापछि आएको पहिराले पुरिएर बेपत्ता भएका दुईजना अझै भेटिएका छैनन् । पहिराले पुरिएर बेपत्ता भएका व्यास नगरपालिका–९ माझफाँटका २० वर्षीय राजेश थापा र व्यास नगरपालिका–११ ओडारेका ४५ वर्षीय पदमबहादुर भुजेल फेला पर्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
बेपत्ता भएकाको सोमबार बिहानदेखि खोजी तीव्र पारिए पनि उनीहरुलाई फेला पार्न नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी उपरीक्षक पौडेलका अनुसार आज पनि बिहानदेखि बेपत्ताको खोजी जारी राखिएको छ । बेपत्ताको खोजीका लागि नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयवासी परिचालित छन् । “आज पनि बिहानदेखि स्काभेटर प्रयोग गरी पहिराले पुरिएकाको खोजी कार्य भइरहेको छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।
पहिराले पुरिएका माझफाँटका ४० वर्षीय कमला थापा, २४ वर्षीय मनोज थापा र २१ वर्षीया अन्जना थापाको शव सोमबार नै फेला परेको थियो । उनीहरु एकै परिवारका हुन् । बेपत्ता रहेका राजेश पनि सोही परिवारका हुन् ।
तनहुँमा आइतबार राति आएको पहिराले पुरिएर दश जनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना बेपत्ता छन् । पहिराले जिल्लाभर दुई सय घर विस्थापित भएको प्रजिअ बद्रीनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पहिराले विस्थापित भएकाहरुलाई स्थानीय तहको समन्वयमा वैकल्पिक बासको व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।
बाढी पहिराका कारण जिल्लामा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण नआइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । पहिराका कारण पृथ्वी राजमार्ग र शाखा मार्गहरुका अधिकांश ठाउँमा रूखहरु ढलेको छ भने कतिपय ठाउँमा सडक भासिएको छ । ढलेका रुखहरुलाई पन्छाएर राजमार्ग सञ्चालन गराइएको छ ।
केही दिनदेखि भीषण वर्षाको खबर सुन्नुभएका तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–८ पल्ट्याङ भैँसीकिलीका आनबहादुर थापालाई आइतबार रातिदेखि नै निद्रा परेको थिएन । उहाँ र श्रीमती ज्योतिमाया पुरानो घरमा सुत्ने तर्खर गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
पुरानो घरसँगै जोडिएको नयाँ घरमा भने उहाँहरुका दुई छोरा, दुई बुहारी र नातिनी गरी पाँच जना सुतेका थिए । राति १२ बजे अकस्मात पहिरो झर्दा आनबहादुर र श्रीमती त बाँच्न सफल हुनुभयो तर उहाँहरुका दुई छोरा र दुई बुहारी र नातिनीको भने ज्यान गयो । घटनापछि आनबहादुर सकुशल हुनुहुन्छ भने उहाँकी श्रीमती ज्योतिमायालाई उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ ।
“आनबहादुर र ज्योतिमाया सुतेको पुरानो घर भत्किए पनि उहाँहरुको ज्यान जोगिएको छ”, ऋषिङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता विजय दरैले भन्नुभयो, “तर सँगै जोडिएको नयाँ घर भने पूरै भत्किएर पाँच जनाको निधन भयो ।” पहिरोले घर पुरिँदा ३० वर्षीय भेषबहादुर थापा, निजकी श्रीमती २९ वर्षीया नानुमाया, छोरी पाँच वर्षीया अमिषा, २२ वर्षीय महादेव र निजकी श्रीमती १९ वर्षीया मनिसराको निधन भयो । एकै परिवारका पाँच जनाको पहिरोले पुरिएर निधन भएपछि सिङ्गो गाउँ नै स्तब्ध छ । “एकदमै नसोचेको घटना भयो, गाउँ पूरै स्तब्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
रातिको समयमा घटना घटेकाले स्थानीयवासीले थाहा पाउँदा बिहानको ५ बजेको थियो । लगत्तै प्रहरीलाई खबर पुगेपछि प्रहरी पनि घटनास्थलमा पुगेर पहिरोमा पुरिएकाको उद्धारमा जुटेको थियो । साथै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि घटनास्थल पुगेको थियो । दिनभरको प्रयासपछि घरमा पुरिएका पाँच जनाको नै शव निकालिएको छ ।
विदेश जाने सपना पहिरोमा बिलायो
व्यास नगरपालिका–९ माझफाँटमा पनि पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका तीन जनाको निधन भएको छ । स्थानीय केशरबहादुर थापाको घर पहिरोले पुरिँदा उहाँकी श्रीमती ४० वर्षीया कमला, छोराहरु २४ वर्षीय मनोज र छोरी २१ वर्षीया अन्जनाको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोले पुरिएर घाइते केशरबहादुरलाई भने उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । केशरबहादुरका २० वर्षीय राजेश भने अझै बेपत्ता छन् ।
पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका मनोज वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारी गर्दै थिए तर उनको विदेश जाने सपना पहिरोमै बिलाएको छ । मनोज वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जान काठमाडौँ यात्राको तयारी गर्दै थिए । रातिबाटै परेको पानी घरभित्र पसेपछि केशरबहादुर पानी बाहिर फाल्दै थिए । अचानक घर पुरिँदा केशरबहादुर भाग्न सफल भए तर घरभित्रका सबै जनाको पहिरोले पुरिएर निधन भयो ।
बाबु केशवबहादुर थापाको खुट्टा थिचेजस्तो भयो । कमला, मनोज, अञ्जना र राजेशलाई घरले थिचिसकेको थियो । केशवबहादुर भने जसोतसो भाग्न सफल हुनुभयो । उँहाको पोखरास्थित गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक अरुण पौडेलले बताउनुभयो । ‘पहिरोले घरमाथिको भित्तोबाट माटोसँगै ४/५ वटा रूखहरू पनि ल्याएको रहेछ,’ स्थानीय सुदीप न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘हिलो र रूखले घरलाई छोपेको थियो ।’
उँहाका अनुसार वरपरका ४/५ वटा घरका परिवारहरू पनि आफ्नो ज्यान बचाउनमै लागिरहेका थिए । ‘सबैलाई आफ्नै ज्यान बचाउनेतिर ध्यान थियो,’ ‘उहाँहरूलाई बचाउने ख्याल नै आएन ।’ वर्षा लगातार भएको र पहिरोको कारण हिलाम्मे भएर हिँड्न नसक्ने अवस्थाले पनि उद्धारमा जान नसकिएको बताउनुभयो ।
पहिरोबाट परिवारकै चार जनाको मृत्यु भएकोबारे अझै विश्वास गर्न नसकेको मनोजकी काकी कल्पना थापा बताउँनुहुचंह । ‘हिजो मात्र म विदेश जान लागेको, भोलि काठमाडौंका लागि निस्कने हो भन्दै थियो,’ उंहाले भन्नुभयो, ‘आज सबेरै यस्तो देख्नुपर्‍यो ।’ मनोज गत माघमा दुबईबाट छुट्टीमा आउनु भएको थियो तर लकडाउनका कारण जान पाउनुभएको थिएन ।अलिक सहज भएपछि उनले शुक्रबार वडा कार्यालयमा गएर काठमाडौं जाने सवारी पासको कागज बनाउनु भएको थियो ।
व्यास नगरपालिका–९ माझफाँटमै पहिरोले पुरिएर ७० वर्षीया मैतकुमारी घर्ती र म्याग्दे गाउँपालिका–६ बेलौतेडाँडाकी १७ वर्षीया लक्ष्मी विकको निधन भएको छ । त्यस्तै व्यास नगरपालिका–११ ओडारेका पदम चेपाङ पहिरामा बेपत्ता भएका छन् ।
मृतकका परिवारलाई राहत
ऋषिङ गाउँपालिकाले पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई सोमबार राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले पीडित आनबहादुर थापालाई राहतस्वरुप रु एक लाख प्रदान गर्नुभयो । जनताको दुःखमा मलम लगाउन राहतस्वरुप उक्त रकम प्रदान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
म्याग्दे गाउँपालिकाले पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएका वडा नं ६ बेलौतेडाँडाकी १७ वर्षीया लक्ष्मी विकको परिवारलाई तत्कालका लागि राहतस्वरुप रु ५० हजार प्रदान गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी राना र उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले मृतकको घरमा पुगेर आफन्तलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । पहिरोले गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा ६१ घरपरिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको छ । विस्थापित भएका परिवारलाई राहतको व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष रानाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वारा दुःख व्यक्त
तनहुँ क्षेत्र नं १ का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले तनहुँ जिल्लामा पहिरोमा पुरिएर भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सांसद श्रेष्ठले पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ ।
पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरुको शीघ्र खोजी गरी अवस्था पत्ता लगाउन सम्बन्धित सरोकारपक्षसँग आग्रह गर्दै सांसद श्रेष्ठले प्राकृतिक प्रकोपमा पर्नुभएका सम्पूर्ण नागरिकको उद्धार र राहतमा जुट्न सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न गरिने पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन नसकिएको हो कि भन्ने महसुस गरिएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “विपद्को अवस्थामा हामीले विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा विपत्तिबाट जोगिन सक्ने सबै उपायहरुको अवलम्बन खोजी गरिनुपर्छ ।”
काठमाण्डौ उपत्यका जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यो पढ्नुहोस
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट ९० वर्षीय बृद्धसहित १० जनाले जिते कोरोना
काठमाडौं उपत्यकामा लागु भएको सटडाउन के हो ?
जोखिममा रहेका काठमाडौंबासीलाई आफैं स्वाब संकलनका लागि जान आग्रह (बिज्ञप्ति सहित)